Akhri Wararkii Maanta ee Wargeyska Warsugan Media Group | Warsugan News
Home Wararka Akhri Wararkii Maanta ee Wargeyska Warsugan Media Group
Siddoo kale, Taliyihii horre ee Nabad suggidda Qaranka Soomaaliya wuxuu sharrax qoddobo muhiim u ahaa Somaliland oo lagu waajihii karro waddahadaladda Somaliland iyo Soomaaliya”Dagaalka lagu qaaday iyo dhibaatadda loo geystay waa in dembiyo dagaal loo aqoonsaddo oo koonfurta Soomaaliya raali-gelin bixiso. 2-In alle iyo inta dembi ka gashay ee la yaqaanno ee waqooyi dembi ka gashay waa in la soo maxkamadeeyaa. 3-waa in magaaladda muqdisho laga qaadin guuloow Siyaasad. Nimankaasinna ma maqli karraan guuloow Siyaad.” Sidaa ayuu yidhi Sanbaloolshe
Hargeysa, 16 October (Warsugan)-Xildhibaan Axmed Cabdi Kijaandhe, ayaa soo jeediyay in Somaliland ay dib uga noqoto dariiqii hore ee ay mari jirtay aqoonsi raadinta, kaasoo uu ku tilmaamay mid khaldan oo qardo-jeex ah.
Xildhibaan Axmed Kijaandhe, wuxuu ku baaqay in qabto shir lagaga tashanayo sidii wax looga bedeli lahaa dariiqaa hore ee ay Somaliland ku socotay 28-ka sannadood ee ay jirtay.
Xildhibaan Kijaandhe, oo hadal ka jeediyay fadhigii Shalay ee Golaha Wakiiladda waxa uu ka warbixiyay shirka Baarlamaanadda Wadamadda Barwaaqo sooranka oo bishii hore uu kaga qayb galay dalka Uganda.
Wuxuunna Xildhibaan Kijaandhe sheegay in shirkaasi ay ka soo qayb galeen xubno Baarlamaan oo ku dhaw shan boqol ilaa kun ruux.
Islamarkaanna ururaddaas ku midoobeen 53 wadan oo adduunka tirsan, isla markaana wadamadaas Baarlamaanadoodu shirkaasi isugu yimaadaan.
Xildhibaan Kijaandhe oo arrimaha sharraxay wuxuu yidhi “Waxaannu tagnay dalka Ugaandha si ay qaybgelan shir lagu casuumay oo ahaa Baarlamaanadda barwaaqo sooranka. Shirkaas oo ahaa mid aad iyo muhiim u ahaa oo ka mid ahaa ururadda ugu waawayn ee la isugu yimaado aduunka kuwa ugu waawayn, oo ay ka soo qaybgeleen xubno Baarlamaan oo ka badan inta u dhaxaysa shan boqol ilaa kun. Wuxuu ahaa ururka barwaaqo sooranka kuwoodda ugu waawayn ee halka ka dhaca. Ururkaasi runtii waa urur taariikh dheer leh, waxaanna ku midoobay ilaa 53 dal oo adduunyadda ka tirsan Baarlamaanadoodda ayaa isugu yimaadda.”Ayuu yidhi Xildhibaan Kijaandhe waxaannu hadalkiisii sii raaciyay ”
“Dariiqa ay somaliland aqoonsiga ku raadinaysay waa khalad iyo qardo-jeex ay haysay ee ay ku doonaysay Somaliland 28-kii sannadood ee danbeeyey ictiraaf inay dib ugu noqoto oo way khaldantahay oo uu qarda-jeex uu ahaa, oo la qabto shir wadda-tashi ah oo loo marayo ictiraafka Somaliland.”Ayuu yidhi Xildhibaan Kijaandhe
Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Oo Sheegay Inuu Xisbiga Waddani Hakiyey Xubintii Komishanka Cusub
Hargeysa, 16 October (Warsugan)-Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Baashe Maxamed Faarax baa ka hadlay warqadda cabashadda ah ee xisbiga Waddani ku hakiyey xubintiisii ka mid ahaanshaha Komishanka Doorashooyinka, kadib markii cabasho ka muujiyeen laba xubnood oo ka tirsan xisbiga Kulmiye iyo xubin ka mid ahayd koomishankii horre.
Gudoomiyuhu wuxuu sheegay in loo soo gudbiyey toddabadii xubnood ee komishanka doorashooyinka, islamarkaanna uu Goluhu ka gudan doonno waajibaadkiisa sharciga ah.
Guddoomiyuhu isagoo arrimaha ka hadlay wuxuu yidhi “Waraaq waxa soo qoray Xisbiga Waddani uu ku hakiyey xubinnimadiisii uu cabashanna ka muujiyay. Marka waraaqdaasi way nasoo gaadhay oo waxay ka cabanayaan laba xubnood oo ay leeyihiin waxay ka tirsan yihiin xisbiga Kulmiye, gabadhunna waxay ka mid ahayd gudidii horre, marka cabashadaasi way jirtaa, oo toddobaddii xubnoodba waannu haynaa.” Ayuu yidhi Gudoomiye Baashe
Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI ayaa hakiyay xubintii ay dhawaan u xusheen in ay ku darsadaan guddida cusub ee doorashooyinka cusub.
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa Komishanka Doorashooyinka cusub u soo Magacaabay Marwo Kaltuun oo ka mid ahayd Komishanka Wakhtigiisu dhamaaday, Mustafe Dhawal iyo Cabdirashiid Riyo-raac.
Mustafe ayaa la sheegay inuu mar ahaa Xoghayaha Golaha Wasiirrada, halka Cabdirashiid Riyo-raacna uu Wasiiru-dawle ka soo noqday noqday Xukuumaddii Kulmiye ee uu hoggaaminayeyMadaxweyne Axmed-Siilaanyo.
Berber, 16 October 2019 (Warsugan)-Dirawalka Wasiirka Waxbarashada Somaliland, ayaa Shalay nin shacab ah ku toogtay deegaanka Tuulada Dhubato, nin shacab ah oo waday mid ka mida Baabuurta waweyn ee marayey Jidka isku xidha Berbera iyo Hargeysa, Xili Wasiirku safar ugu sii jeeday dhinaca Gobolka Togdheer.
Dhaawaca ninka shacabka ah baa lagu dawaynayaa Cusbitaalka Dacar-budhuq sida uu warbaahinta sheegay goobjooge ku sugnaa goobtu dhaawacu ka dhacay. Dirawalkii Wasiirka ee bastoolada ku dhaawacay ninkan shacabka ayaa lagu xidhay Saldhiga Degmada Laasgeel, waxaanna labadoodaba xalay loo soo qaaday dhinaca caasimadda Hargeysa.
Weftigii Wasiirka oo xiliga ku sugan Magaalada Berbera ayaa gaadhigisii si ku meel-gaadh ah, waxa loogu dhiibay Dirawal ka mida shaqaalaha Wasaaradda Waxbarashada Gobolka Saaxil.
Ururka Midnimadda Somaliland
Oo Lagaga Dhawaaqay Dalka Ingiriiska
London 16 October 2019 (Warsugan)-Dadweynaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Ingiriiska, ayaa isugu yimi kulan aad u ballaadhan oo lagu daah-furayo urur lagu magacaabbo ururka midnimadda Somaliland.
Kulanka waxa ka soo qayb-galay Salaadiin, Cuqaal iyo Aqoonyahanno ka soo kala jeedda Magaaladda London iyo dacalladeedda. Kulanka waxa sharraxay Aqoonyahannaddii ka soo qayb-gelay kulanka lagu shaacinayay ururka midaynta Somaliland “Ururka midaynta Somaliland waxa loo aas-aasay oo macnihiisu waxa weeye isu-duubni waddareed. Umadda Somaliland waa in ay isu-duubnaata min cidhif ilaa cidhif.”
“Dareenkaasi markii uu yimi, waxaannu garanay in meel la isugu keenno reer Somaliland oo dadka samaha jecele isugu yimaadaan.” “Ninkii midnimadda Somaliland iyo nabadgelyadeedda iyo degannaanshaheedda ka horyimaadda, haddii uu wacyi-gelinta ku waantoobi waayo waa inaynnu si kale shaqo uga qabno oo aynnu waddanka daafacno.” Guddoomiyaha ururka Midnimo ayaa gaba-gabaddii khadka skype-ka ka soo galay dalka Australia.
Maraykanka Oo Xayiraad Saaray Wasiiro Turkish Ah
Washintong, 16 October 2019 (Warsugan)-Maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay saraakiil sare iyo dhowr Wasiir oo Turki ah, taas oo Mareykanka uga fal-celinayo howlgalka Miletari ee uu Turkigu ka wado waqooyiga Suuriya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula hadlay Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, isla markaasna ka codsaday in heshiis xabad joojin ah la gaadho, sida uu sheegay Madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence.
Pence wuxuu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u safri doono gobolka si xaaladda loo dejiyo.
Sida ay sheegtay wasaaradda Maaliyadda Mareykanka, xubnaha cunaqabateynta la saaray ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka Gaashaandhigga Hulusi Akar, Wasiirka Arrimaha Gudaha Suleyman Soylu, iyo Wasiirka Tamaarta Fatih Donmez.
Xubnahan ayaa la xanibay hantida ka taalla Mareykanka, waxaana la mamnuucay in wax xidhiidh maaliyadeed ah lala sameeyo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku cadaadinaya dowladda Turkiga inay joojiso hawlgalka ay ka waddo Waqooyiga Syria, wuxuuna qorsheynayaa inuu Ankara u diro wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, si ay mas’uuliyiinta dalkaas ula yeeshaan wada-hadallo lagu xalinayo xaaladda.
Tallaabooyinka Trump ayaa ka dambeeyey dhalleeceyn xooggan oo uu la kulmay toddobaad kadib markii Aqalka Cad uu ku dhowaaqay in Turkiga ay ku dhaqaaqayaan hawlgalkooda ka dhanka ah Kurdiyiinyta Mareykanka ka taageeray dagaalka Daacish.
Trump ayaa Isniintii telefoonka kula hadlay madaxweyne Reccep Tayyip Erdogan iyo Jeneral Mazloum Kobani, oo ah madaxa jabhadda SDF ee ciidankeeda badankood ay yihiin Kurdiyiinta.
Mareykanka ayaa sare u qaaday canshuurta la saaro biraha Mareykanka looga soo dhoofiyo Turkiga, wuxuuna hakiyey wada-hadallada heshiis ganacsi oo ku kacaya 100 bilyan oo dollar oo uu la lahaa Turkiga.
Dhinaca kale, xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay inuu toddobaadka soo socda u safri doono magaalada Brussels, si uu gaashaanbuurta NATO, oo Turkey ay xubin ka tahay, ugu cadaadiyo cunaqabateen ka dhan ah Ankara.
Soomaalidu waa dad ku nool Bariga Afrika, waa dad xoolo dhaqato ah,isla markaan ka yimi nolosha miyiga, Waa dad reer guuraa ah noloshooduna ku tiirsan-tahay xoolaha iyo wax-soo-saarka dhulka.Waa dad ku abtirsada diinta Islaamka. Sidaa daraadeed qiyam-ka ummadann iyo dhaqankeeddu waxay isu-fal-galeen si aada. Waxayna dhaqanka iyo Diinta ay heystaan oo Islaam ah noqdeen qaar isu milma.
Previous articleSomaliland: Dirawal Wasiir Oo Toogtay Qof Shacab Ah
Next articleDaawo Madaxweyne Biixi Oo Ka Jawaabay Cabashada Xisbiyada Mucaaridka ee Xubnaha Komishanka iyo Cabashadii Dugsiyada Madaxa Bannaan